Barnaamujka kulanka todobaadka oo lagu falanqeeyay shirka IGAD oo Sabti Muqdisho ka furmaya,(Dhageyso+Sawirro) 9/01/2015 – Radio Muqdisho
in Tartanka Ramadaan, Wararka Raadiyahaa
Barnaamijka kulanka Todobaadka oo ka baxa Radio Muqdisho iyo Telefishinka Qaranka ayaa looga hadlay shirka wasiirrada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD iyo faa’iidada ugu jirta Soomaaliya.
Barnaamijka ayaa waxaa marti ku ahaa Maxamed Jaamac Cali oo ah diblomaasi, ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, afhayeenka wasaaradda amniga iyo wasiirkii hore ee warfaafinta Inj. Yariisoow, kuwaasoo falan qeyn dheer ku sameeyay wax yaabaha ka soo bixi doona shirka IGAD ee beri ka furmi doona Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa 24 sano kadib martigelineysa shirka IGAD, iyadoo maanta wasiirrada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD ay ku soo qul qulayaan magaalada. 09/01/2015.
Ciidamada ammaanka ee dowladda ayaa adkeeyay ammaanka magaalo madaxda Muqdisho.
Tartamayaasha Degmada Wadajir oo tartan adag kadib u gudbay wareegga 2aad “SAWIRRO”
Sawir qaade Farxaan Suleymaan Daahir
Wasiirka arrimaha dibadda Djabuuti oo soo gaaray Muqdisho
Xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo saaxibadeeda IGAD'akhriso'